Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dadka » Booqashada Carlsbad waxay ku dhawaaqaysaa Madaxa Fulinta Cusub ee Cusub
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Booqo Carlsbad oo ku dhawaaqday Maamulaha Cusub, Kim Sidoriak
Doorkeeda cusub oo ah Madaxweyne & Maamulaha Booqashada Carlsbad, Kim wuxuu rajeynayaa inuu iskaashi la yeesho bulshada iyo ganacsiyada maxalliga ah si kor loogu qaado meesha loo socdo iyo in la dhexgeliyo Booqashada Carlsbad shaqsiga magaalada iyo meheradaha gaarka ah. Waxay qorshaynaysaa inay sare u qaaddo meesha loo socdo heer qaran iyo inay kordhiso muuqaalka suuqyada muhiimka ah, iyadoo adeegsanaysa cilmi -baaris xog si ay u gaarto go'aanno xog -ogaal u ah baaxadda iyo gaarsiinta ururka.
Ururka suuqgeynta meelaha loogu talagalay Magaalada Carlsbad, California ayaa magacowday maamule cusub.
Kim Sidoriak wuxuu ahaa Sarkaalka Suuqgeynta Santa Monica Travel & Tourism ka hor inta uusan la wareegin Booqashada Carlsbad.
Booqo Carlsbad ujeedadiisu waa in sare loo qaado Carlsbad oo ka mid ah meelaha loo dalxiis tago ee Koonfurta California.
Booqo Carlsbad, oo ah ururka suuq geynta magaalada Carlsbad, ayaa ku dhawaaqay magacaabista Madaxweynaha & Maamulaha, Kim Sidoriak.
Kahor inta uusan ku biirin kooxda Booqashada Carlsbad, Kim wuxuu ahaa Sarkaalka Suuqgeynta Sare Santa Monica Safarka & Dalxiiska halkaas oo ay mas'uul ka ahayd istaraatijiyad, xeelado iyo barnaamijyo xoojiyay xiisaha, dalabka iyo aqoonsiga Santa Monica.
Tallaabadan, Kim wuxuu la shaqeyn doonaa Booqo Carlsbad kooxda iyo daneeyayaasha muhiimka ah si kor loogu qaado Carlsbad oo ka mid ah meelaha loo dalxiis tago ee Koonfurta California.
At Santa Monica Socdaalka & Dalxiiska, tabarucaadka Kim waxaa ka mid ahaa dib-u-habeynta sumcadda astaanta u ah Santa Monica iyo bilaabidda qorshaha istiraatiijiyadeed ee 5-sano ee ururka. Waxa kale oo ay xubin ka tahay Booqashada California Brand and Content Committee waxayna ka heshay Shahaadada Fulinta Maaraynta Maaraynta Maaraynta ee Shahaadada leh Meelaha Caalamiga ah.
U guuritaanka Carlsbad, wuxuu Kim u soo dhoweynayaa qoyska iyo Kim wuxuu qorsheynayaa inuu noqdo xubin muddo dheer ka tirsan bulshada maxalliga ah iyo aagga San Diego North County. "Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan u dhowaado qoys ballaadhan, aad baanna u sugayaa inaan noqdo xubin firfircoon oo ka mid ah bulshada firfircoon ee Carlsbad," ayuu yidhi Sidoriak, oo sidoo kale door ku lahaa isgaarsiinta suuqgeynta Hilton Hotels Corporation iyo Saatchi & Saatchi Advertising.
Doorkeeda cusub ee ah Madaxweyne & Maamulaha guud ee Booqo Carlsbad. Waxay qorshaynaysaa inay sare u qaaddo meesha loo socdo heer qaran iyo inay kordhiso muuqaalka suuqyada muhiimka ah, iyadoo adeegsanaysa cilmi -baaris xog si ay u gaarto go'aanno xog -ogaal u ah baaxadda iyo gaarsiinta ururka.
"Kim wuxuu keenaa isku -darka khibradda, hindisaha iyo shaqsiyadda si uu u hoggaamiyo mas'uuliyadda ururka loo socdo cutubkan xiga ee koritaanka," ayuu yiri Troy Wood, Guddoomiyaha Guddiga Booqashada Carlsbad. “Damaca Kim, waditaankiisa iyo kartidiisa si uu uga shaqeeyo hagaajinta magaalada ayaa gacan ka geysan doonta sare u qaadidda ururka iyo magaalada si wada jir ah.”
Kim waxay ka heshay Jaamacadda Koonfurta California Bachelor of Arts ee Isgaarsiinta iyada oo hamigeeda ugu weyn uu yahay inay u safarto adduunka si ay wax uga barato dhaqamada kala duwan.